SADIO MANE oo u tartamaya ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC-da
NABY KEITA oo u tartamaya ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC-da
AUBAMEYANG oo u tartamaya ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC-da
AUBAMEYANG - Cayaaryahanka xulka Gabon iyo kooxda Borussia Dortmund
VICTOR MOSES – Ciyaaryahanka xullka Nigeria iyo kooxda Chelsea
Markii Victor Moses uu dib u milicsado xirfaddiisa, ciyaaryahankan khadka dhexe uga dheela xulka Nigeria iyo kooxda Chelsea ayaa waxaa u soo baxaysa in xilli ciyaareedkii 2016-2017 uu ahaa midkii ugu wanaagsanaa.
VICTOR MOSES – Ciyaaryahanka Nigeria and Chelsea
Xiddiga uu dheelo xulka Gabonl Aubameyang ayaa ka mid noqday shanta ciyaaryahan ee ku tartamaya ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC-da.
Xiddiga horyaalka Ingiriiska ee Thierry Henry ayaa Salaax ku tilmaamay 'qof gaar ah'. Haddaba ninkan ma noqon doonaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Masar u dhashay ee ku guuleysta abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC
Ciyaartoyda ku tartamaysa Laacibka Afrika ee BBC oo maanta la shaacin doono
Waxaa xilli dambe oo maanta ah la shaacin doonaa magacyada shanta ciyaaryahan ee sanadkan ku tartami doonta Ciyaaryahanka ugu Wanaagsan Kubadda Cagta Afrika ee BBC-da.
Croatia oo ku durdurisay Giriigga
Croatia ayaa kala daadisay difaacii Giriigga iyaga si wanaagsan uga raayay Giriigga oo ay ku martigaliyeen caasimaddooda Zagreb.
Halkan ka dhageyso Barnaamijka Ogaal
Farmaajo muxuu kala hadli doonaa Imaaraadka?